Carbon Steel efere
Eyi eguzogide ọgwụ Steel efere
Weather eguzogide ọgwụ Steel efere
SSAW Pipe / Gburugburu ígwè ikpo anwụrụ / tubular ikpo
Ngwongwo ígwè eji ajị anụ bụ ọkpọkọ nchara eji efere nchara ma ọ bụ ibe ndị a na-amịkpọ na welded, ma n'ozuzu ha bụ 6 mita n'ogologo. Usoro mmepụta nke welded nchara anwụrụ dị mfe, mmepụta arụmọrụ dị elu, ọtụtụ na nkọwapụta dị ọtụtụ, ntinye akụrụngwa dị obere
Carbon ígwè efere, carbon steel mpempe akwụkwọ, carbon ígwè eriri igwe Carbon ígwè bụ ígwè na carbon ọdịnaya ruo 2.1% site na ibu ibu. Oyi Rolling Carbon ígwè efere ọkpụrụkpụ n'okpuru 0.2-3mm, na-ekpo ọkụ Rolling Carbon efere ọkpụrụkpụ 4mm ruo 115mm
Efere ndu kwesịrị ịdị 4 ruo 5 mm ọkpụrụkpụ iji kpuchido radieshon. Akụkụ bụ isi nke efere ndu bụ ndu, nha ya dị arọ, njupụta dị elu
Igwe anaghị agba nchara efere nwere ezigbo elu, plasticity dị elu, ike na n'ibu ike, na-eguzogide corrosion site asịd, alkaline gas, ngwọta na ndị ọzọ na media. Ọ bụ ihe alloy ígwè na-adịghị mfe nchara, ma ọ bụ nnọọ ajari-free.
A ga-ekpughere Nchara igwe na ikuku na ikuku na-enweghị eserese. Ọ na-amalite nchara nchara n'otu ụzọ ahụ dị ka nchara nkịtị. Ma n'oge na-adịghị anya, ihe ndị na-eme ka mmiri dị na ya na-eme ka ihe mkpuchi dị nchara nke ọma na-etolite, si otú ahụ na-egbochi ọnụego nchara.
Efere ígwè ndị na-eguzogide na-ezo aka na ngwaahịa ndị efere pụrụ iche ejiri n'okpuru ọnọdụ akwa. Ka ọ dị ugbu a, efere ndị na-eguzogide ọgwụ ndị a na-ejikarị eme ihe bụ efere nke obere ígwè carbon ma ọ bụ nchara ala dị ala nke nwere ezi ike na plasticity site na ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ na ụfọdụ osisi.
Square & akụkụ anọ tube
Ngwa: The ojiji nke square anwụrụ ewu, ígwè n'ichepụta, ígwè ewu oru, shipbuilding, eletriki injinịa, ụgbọ ala Chassis, ọdụ ụgbọ elu, okporo ụzọ okporo ígwè, ụlọ ewu.
Hot akpọrepu H Doo Steel
Ngalaba H-akụkụ ígwè bụ ngalaba akụ na ụba na-arụ ọrụ nke ọma yana oke kesaa mpaghara mpaghara na oke nkenke ibu ibu. Aha ya bụ maka na ngalaba ya na mkpụrụedemede bekee “H” bụ otu.
Igwe anaghị agba nchara Now Bar / Rod
Dịka usoro mmepụta, a pụrụ ikewapụta Ogwe igwe anaghị agba ụdị atọ: ọkụ akpọre akpọrọ, gbagọrọ agbagọ ma dọpụta oyi. Nkọwa nke igwe anaghị agba nchara gburugburu bụ 5.5-250 mm.
Ngwa ngwa: ngwa mbufe ike (dika: akụrụngwa ụgbọ ala, ibo ụzọ, windo, ahụ ụgbọ ala, nku ọkụ, mkpokoro ogige). Njirimara: ike dị n'etiti, ezigbo nguzogide corrosion, arụmọrụ dị mma nke ọma, arụmọrụ arụmọrụ dị mma (ọ dị mfe ịgbasapụ), arụmọrụ dị mma na agba.
Carbon Steel Mkpanaka
Ọkwa: 201,202,304,309,310,310S, 316,316L, 410, 420,430,904L Size: Gburugburu ọkpọkọ OD: 3-1219mm, ọkpụrụkpụ: 0.1-60mm Square pipe Obosara ： 7 × 7 -150 × 150mm, ọkpụrụkpụ ： 0.4 ～ 8.0mm Rectan 20 - 110 × 150, ọkpụrụkpụ ： 0.4 ～ 10mm Mgbe ogologo 6m, ca dị ka arịrịọ gị hazie
Igwe anaghị agba nchara bụ ụdị oghere ogologo gburugburu / square nchara, igwe anaghị agba nchara na-ekewa n'ime enweghị nkebi anwụrụ na welded nchara anwụrụ. A na-ejikarị ya na mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ọgwụgwọ ahụike, nri, ụlọ ọrụ ọkụ, igwe ọrụ.
2020, China si ígwè ahịa ahịa ga-fa ...
Na mpaghara Comprehensive Economic Partn ...
Ndị na-ere ahịa ígwè na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ predi ...